Nidaamyada Isuduwaha UTM ee lagu sawiray Khariidadaha Google - Geofumadas
Luulyo, 2012 Cartografia
Uma muuqdo, laakiin khayraadka ah ee Adeegyada Waalidka ee PlexScape Isku-beddelada isku-beddelka oo ku eeg Khariidadaha Google Waa jimicsi xiiso leh si loo fahmo habka isku-xirnaanta ee gobollada kala duwan ee adduunka.
Tani, waxaa laga soo xulay guddiga Isku-Duweyaasha Nidaamyada, waddanka kadibna Nidaamka Isku-xirka iyo Datum ee kala duwan ayaa u muuqda in adeeggu uu isku-dhafan yahay aagagga codsanaya. Adkeysiga muraayada weyn, waxaad ka arki kartaa joomatari lagu sawiray khariidada sida ku cad muuqaalka qaar ka mid ah lagu isticmaalo Brazil.
Waxaan fursad u helayaa in aan soo koobo kuwa soo bandhigi kara xiisaha noocan ah, inkasta oo ay jiraan wadamo kale iyo xitaa qaar ka mid ah kuwa ku haboon sida Yurub, Koonfurta Ameerika, iwm.
Xidigga XVIII 1963
Koonfurta Ameerika 1956
Mareykanka Labadan dal waxaa jira nidaam ku dhawaad ​​gobol kasta, marka laga reebo qaababka xajmiga gobolka
NAD27 (Qeexitaanka 1976)
Jamhuuriyadda Dominican Haiti
Nidaamyadaan oo idil, oo leh aagahooda kala duwan waxaad arki kartaa isku-duwayaasha Google Earth ee labada qaybood ee la saadaaliyay iyo juquraafi ahaan. Waxaa sidoo kale jira fariin iyaga ka mid ah, in haddii nidaam gaar ah aysan jirin, waxay isku xirxiraan haddii la soo sheego.
Post Previous" Hore U fiirso UTM isuduwidda Khariidadaha Google, oo isticmaalaya wax! Nidaam kale oo isudduwe ah
Post Next Sayniska iyo Teknolojiyada Macluumaadka Juqraafiga… iyo Bulshada isticmaala gvSIG ee HondurasNext »
2 Jawaabo "Nidaamyada Isku-xidhka UTM ee lagu sawiray Khariidadaha Google"
Google wuxuu isticmaalaa WGS84
Vivian Fernandez isagu wuxuu leeyahay:
Saalax wanaagsan Habeen Waxaan rabaa in aan ogaado waxa nidaam isku-dubbaridan oo aan u adeegsan karo in aan ku canaanto xogaha qaar ee aan haysto ee Panama ee Google Earth ee ku yaal kmz, waxay ku jiraan WGS 84, sida muuqata waa inaan adeegsadaa Nad27 laakiin markii aan baddalanayo macluumaadka wuxuu dhahaa malaha qeexitaan nidaamka isku-dubbaridida, dhanka kale hadaan kuu sheego inaad qeexdo, waxay “bedelaysaa”, laakiin si liidata ayaa loo saadaaliyay, maxaan sameeyaa? Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada